Ungaphili impilo engaphezu kwamandla akho – isexwayiso kubathengi – LIVE Express
Ungaphili impilo engaphezu kwamandla akho – isexwayiso kubathengi
Abathengi bakuleli sebexwayiswe ngokuthi baqaphele indlela abasebenzisa ngayo imali kanye nokuthi baphile impilo abangayikhona.
Lezi zixwayiso zilandela izinqumo zezinhlangano eziklelisa amazinga eminotho yamazwe iMoody kanye neStandard & Poor’s (S&P) ngesimo somnotho waseNingizimu Afrika.
Umhlaziyi wasesikhungweni semfundo ephakeme i-University of KwaZulu-Natal, uLukhona Mnguni, unxuse abantu bakuleli ukuba baphile impilo elingana namandla abo futhi bagweme izikweleti ezintsha njengoba zingase zibe nama-interest rates aphezulu.
FUNDA NALOLU DABA: Nakhu okumele ukwenze ukugwema ukuqolwa kwi-ATM
UMnguni uthi izakhamizi zakuleli kuzomele ziqhamuke nezinto ezintsha ezizodala amathuba emisebenzi kanye nokukhulisa umnotho. “Sonke ngezindlela zethu asizameni ukuthola izindlela ezintsha zokubamba iqhaza emnothweni ngale nje kwabantu abathola imisebenzi kanye nabaqashwayo,” kululeka uMnguni engxoxweni ne-SAnews.
UMnguni uthi uma kungukuthi iMoody’s inquma ukwehlisela iNingizimu Afrika esigabeni esiphansi somnotho (junk status) ngoFebhuwari, kungaholela ekutheni abantu abakhokhela izikweleti ezifana nezindlu kanye nezimoto bagcine sebekhokha kakhulu. “Izindleko zokuphila zizonyuka,” kusho uMnguni.